अपार्टमेंट मा मरम्मत गर्न प्रत्येक मालिक, एक विशाल फर्श सहित सामाग्री संख्या विचार छ। आधुनिक बजार हामीलाई उत्पादनहरु फर्श लागि एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ, त्यसैले एउटा अनुभवहीन खरीदार कहिलेकाहीं विकल्प मध्ये एक पक्षमा एक विकल्प बनाउन धेरै गाह्रो छ।
बांस को तल्ला - आज हामी नयाँ उत्पादनहरु को निर्माण बजार को एक बारेमा कुरा। यो फर्श को प्रकार अपेक्षाकृत हालै हाम्रो समतल यति धेरै प्रतिनिधित्व छैन, यो के विशेषताहरु छ देखा छ।
को बांस फर्श यो सामाग्री संग थप परिचित प्रदान गर्दछ कुरा बुझ्न, यसको मुख्य विशेषताहरु, लाभ, बेफाइदा र माउन्ट प्रविधि विचार गर्नुहोस्।
सामाग्री को मूल
बांस फर्श एउटै नाम (बांस) को बिरुवाहरु को ड्राई बालाको गरे फर्श लागि उत्पादन भनिन्छ। निम्नानुसार यसको उत्पादन प्रक्रिया छ:
कच्चा सामाग्री, जो 4-6 वर्ष को उमेर पुगेको छ, पूर्व-प्रक्रियामा छ: चीनी, defatted र sterilized को खाली छ।
भिजेको दिइएको तापमान जहाँ ड्राई मा आगोको भट्टी मा राखिएको छन् stems।
यो तयार सामाग्री चिप्स मा चोट छ, र त्यसपछि बांस स्ट्रिप्स मा दबाब थिचिएको। उच्च गुणस्तर र वातावरण मैत्री उत्पादन निर्मित परिणाम billets देखि।
को छत को प्रकार बांस बनेको
आधुनिक प्रविधिहरू एक कच्चा माल गर्न उत्पादकहरु जो संरचना, रंग र कोट प्रकार भिन्न फर्श को धेरै किसिमहरु, उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ।
निर्माण समयमा पट्टा सामाग्री तेर्सो वा ठाडो राखिएको हुन सक्छ।
पहिलो मामला मा, उत्पादन सबैभन्दा प्राकृतिक वास्तविक काठ को एक अनुकरण सिर्जना देखिन्छ। ठाडो व्यवस्था को छत संग peculiar ढाँचा संलग्न र कट बोर्डहरू "वार्षिक" घन्टी बोट नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ।
साथै, बांस फर्श रंग द्वारा प्रतिष्ठित छ। उत्पादन यसको प्राकृतिक फारम वा गर्मी उपचार प्राप्त छ जो एक मामूली कफी को, tinge प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अग्र समाप्त कोटिंग एक चमकदार वा मत्ती लाह संग उपचार हुन सक्छ।
अब बांस फर्श को नै गुण के छ विचार गर्नुहोस्। को फाइदा र बेफाइदा कुनै पनि परिष्करण सामाग्री छ। फर्श यस प्रकारको - कुनै अपवाद छ। हामी यसलाई आबद्ध कि सकारात्मक विशेषताहरु कुरा भने:
• वातावरण मैत्री। सामाग्री को प्राकृतिक मूल मानवजातिले र वातावरण लागि बिल्कुल सुरक्षित छ बारे कुरा गर्न सम्भव बनाउँछ।
• सहनशीलता र बल। बांस विशेष यो तल को कवर बनाइएका त प्रयोग गर्न सकिन्छ पनि मान्छे को उच्च यातायात संग क्षेत्रमा, कठोरता छ। उच्च गुणस्तरीय को छत को निर्माता आफ्नो उत्पादन मा एक 30 वर्ष वारेन्टी दिन्छ।
• चिस्यान गर्न प्रतिरोधी। भौतिक संरचना उच्च दबाब संकुचित को छत कच्चा माल को निर्माण समयमा देखि पर्याप्त चिस्यान सम्झना गर्छन।
• कुनै विरूपण। तला प्रकारका कुनै चर्किएको, विरूपण र fissuring विषय छैन।
• व्यावहारिक मूल्य। यसको सबै आकर्षण बांस फर्श को लागि यो प्राकृतिक काठ बाट बनेको समान उत्पादन भन्दा धेरै सस्ता छ।
रिच रंग •। सामाग्री मा भित्री रंग धेरै सजिलो छ त माथि को फर्श छनोट, दाग गर्न सजिलो छ।
• रह्नुहोस, antistatic। बांस फर्श धूलो आकर्षित छैन, त्यसैले विशेष हेरविचार आवश्यक छैन।
• बहाली को संभावना। समय को छत को खण्ड sanded र वार्निश पुन खोल्न सकिन्छ।
सकारात्मक प्रदर्शन को प्रशस्त तथापि, अप्रिय आश्चर्य जोगिन, तपाईं ध्यान नकारात्मक गुणहरू, जो बांस फर्श छ तिर्न पर्छ, धेरै खरीदारों आकर्षित गरेको छ। उपभोक्ता समीक्षा निम्न तथ्य बारे यसो भन्छन्:
तल, बांस फर्श संग लाइन कोर्नु गर्न धेरै सजिलो छ;
पराबैंगनी रेज को प्रभाव अन्तर्गत को छत यसको मूल फारम हराउछ;
उत्पादनहरु गाढा टोन धेरै नरम कोटिंग्स प्राकृतिक रंग;
समय भारी फर्नीचर को खुट्टा, बोर्ड को सतह मा एक दाग गठन।
तल्ला कवर को आत्म-विधानसभा
बिछाउने बांस फर्श दुई तरिकामा गर्न सकिन्छ:
सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ ड्राई बिछाउने विधि। यस मामला मा, फर्श अनुबंध र सबै दिशामा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानहरू डकिंग लोड बोर्डहरू कम छ, र फलस्वरूप - शब्द को छत सेवा बढ्छ।
तपाईं आफैलाई सामना तल्ला प्रदर्शन गर्ने निर्णय भने, सबै आवश्यक उपकरण र सामाग्री थिए हात मा छ गर्न निश्चित गर्नुहोस्। अर्थात
Chipboard वा पङ्क्तिबद्ध लागि प्लाईवुड आधार;
को छत लागि विशेष हथौडा;
दाँत संग स्पाटुला;
को छत टास्ने (fixation को चुनिएको विधि आधारमा)।
तपाईं खरिद सामाग्री बिछाउने सुरु गर्नु अघि, यो प्याकेज मुक्त हुनुपर्छ र कम्तीमा 48 घण्टा कोठा छोड्न। यो किनभने तापमान र सामग्रीको चिस्यान मा परिवर्तन को स्थापना पछि विकृत छैन भनेर क्रममा आवश्यक छ।
यस समयमा तपाईं आधार तयारी लाग्न सक्छ। ठोस screed चर्किएको, pits, hillocks र voids बिना रूपमा चिल्लो हुन छ। शब्द को छत सेवा हदसम्म राखे जो मा सतह गुणस्तर निर्भर सम्झना।
यसको पङ्क्तिबद्ध प्रक्रिया निम्न कदम समावेश:
1 आधार प्राइमर गहिरो प्रवेश संग उपचार गरिएको छ।
2. सुकेको ठोस को शीर्ष मा सिमेन्ट आत्म-leveling screeds एउटा सानो पत्र हालिएको छ। यो काम समाधान को निर्माता को सिफारिसहरू संग सख्त अनुसार गरिन्छ। तह को एकरूपता भवन स्तर नियन्त्रित छ।
3. को screed राखे गर्न सकिन्छ पछि hydro- र वाष्प सील सामाग्री (आवश्यक छैन)।
4 अर्को, सब्सट्रेट कुनै पनि काठ-आधार सामाग्री देखि राखिएको छ। पानामा मोटाइ कम्तिमा 12 मिमी हुनुपर्छ।
5 विश्वसनीयता सामाग्री स्क्रू वा dowels संग निश्चित छ।
6 राम्रो पकड सतहहरु लागि जमीन ध्यान जमीन प्राप्त थिए।
, काम चिस्यान र सुख्खा भूमि को स्तर ध्यान रही। भर्खरै भर टाई सामाग्री मा राख्नु सिफारिस छैन!
बोर्डहरू को 1 स्थापना ढोका विपरीत पर्खाल बाट सुरु गर्नुपर्छ।
2. पर्खालहरु र स्ट्याकिङ तस्वीर बीच प्राविधिक 1-1.5 सेमी मा एक खाली छोड्न पर्छ। यो दूरी यसलाई विस्तार गरिएको छ भने कवर तल्ला को उपस्थिति कायम हुनेछ।
3. भएको slats को "जिब्रो र नाली" (45 डिग्री) र काठ को छत हथौडा tamp अनुसार प्रत्येक अन्य संग जोडिएको छन्।
4 सबै आवश्यक छेद (ताप पाइप र अन्य संचार लागि) पहेली कटौती।
5 सबै-प्राकृतिक उत्पादनहरु (पेंट्स र वार्निश बाहेक) प्रयोग फर्श लागि, बिछाउने पछि बांस फर्श पीस गरिन्छ भने। एक विशेष वार्निश को एक सुरक्षा तह लागू गर्न सम्भव छ पछि।
6 स्क्रू संग तय जुन स्थापित baseboards काम, को समाप्तिमा।
समाप्त कोटिंग चार दिनको अवधिका लागि संचालित गर्न सकिन्छ।
बांस फर्श हेरचाह
उल्लिखित रूपमा, बांस फर्श कुनै विशेष हेरविचार आवश्यकता छैन। तर, यसको कार्यका लागि केही निर्देशन पालन गर्नुपर्छ।
• अपार्टमेंट सफाई मा पक्रने, चिस्यान को को छत ठूलो रकम संग सम्पर्क अनुमति र आक्रामक डिटर्जेंट प्रयोग नगर्नुहोस्। बस निर्वात यसलाई गरेकी को सफाई को लागि। भिजेको सफाई राम्रो wrung कपडा गरेको छ।
• पानी भुइँमा गिरा छ भने, यो चाँडै सखाप गर्नुपर्छ।
• यस को छत कुनै पनि यांत्रिक क्षति जोगिन प्रयास गर्नुहोस्। विशेष सावधानी फर्नीचर को rearrangement समयमा exercised गर्नुपर्छ। पैड महसुस एक विशाल फर्नीचर खुट्टा चिपके गर्न सकिन्छ मा, तल्ला scratching रोक्न।
• एडी वा हार्ड-soled संग जूता मा घर वरिपरि हिंड्न नगर्नुहोस्।
• कोठा जहाँ सजावटी सामाग्री राखिएको छ (छैन 55% भन्दा) मा चिस्यान अधिक छैन।
बांस फर्श: प्रकार, मूल्य
संक्षेप, म बांस फर्श को लागत उठाउन चाहन्छ। यो प्रश्न उत्पादन सामाग्री र निर्माता को प्रविधी मा निर्भर गर्दछ। प्रति m² 2000-3000 rubles वरिपरि मूल्य गुणस्तर सामाग्री।
भने, यसको निर्माण plasticizers र रेजिन यो प्रक्रिया सहज बनाउन प्रयोग समयमा, उत्पादन कम मूल्य ट्याग (बारेमा 1,500 rubles) छ, तर यो मामला मा उत्पादन स्थिरता बारेमा, बोल्न सक्नुहुन्न।
श्रेणीबाट गरे उच्च अन्त सामाग्री, (जस्तै बांस फर्श Amigo रूपमा), अधिक महंगा खर्च हुनेछ। तर आफ्नो जीवन धेरै ठूलो छ।
सामान्य, बांस फर्श मा - यो काठ को छत काठ, लिनोलियम र laminate ठूलो वैकल्पिक छ। अनुकूल मूल्य र उच्च सौंदर्य प्रदर्शन परिसर सबै प्रकार यो सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ।
पर्खाल बाट हटाउने तरल वालपेपर: प्रविधी र सिफारिसहरू विवरण हटाउन सुविधाहरू
ब्लेनडर्स Braun को मर्मत
कपर चिल्लो: विशेषताहरु र सुविधाहरू
IKEA भान्सा: समीक्षा, लाभ
ए एस Pushkin "ब्लिजार्ड": काम सारांश
स्काइप मा अंग्रेजी: एक स्काइप-स्कूल र शिक्षक छान्ने गलत हुन कसरी छैन
डेइकन सफा गर्ने बेला? कसरी डिकनको भण्डार गर्नुहुन्छ?
कामवासना - एक महामारीले?
Mendeleevskaya मा रेस्टुरेन्ट "स्टेक र पेन्टा": फोटो र समीक्षा
कार उपकरण किरा: वर्णन, गुणस्तर र पूर्ण सेट
पूल संग समुद्र मा Anapa मा सस्ता होटल